ဖန်သားမျက်နှာပြင်တစ်ခုလို ထူးခြားဆန်းသစ်နေတဲ့ OPPO F7 ဒီဇိုင်းက သင့်စတိုင်လ်ဖြစ်နိုင်မလား? – MyTech Myanmar
ဖန်သားမျက်နှာပြင်တစ်ခုလို ထူးခြားဆန်းသစ်နေတဲ့ OPPO F7 ဒီဇိုင်းက သင့်စတိုင်လ်ဖြစ်နိုင်မလား?
ယခုခေတ်ကြီးထဲမှာ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ဖုန်းရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းက ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အရေးပါတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? ဖုန်းတစ်လုံးကို စတင်မဝယ်ယူခင်မှာ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို တဖြည်းဖြည်းချင်းသိအောင်ကြိုးစားကြတာဖြစ်ပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ အဲ့ဒီဖုန်းကိုနောက်ဆုံးဝယ်ယူမှုအဆင့်ထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းရဲ့ညှိုယူဖမ်းစားမှုတွေက နောက်ထပ်ဒီဖုန်းအကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာသိရှိသွားစေနိုင်အောင်ပါ ဆက်လက် တွန်းပို့ပေးနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအတွက် လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်အကြည့်မျိုးက မတူညီနိုင်ပေမယ့် ဆန်းသစ်မှုလည်းရှိမယ်၊ ပုံမှန်ဒီဇိုင်းဖရိမ်ထဲကနေလည်းခွဲထွက်နေမယ်၊ နောက်ပြီးတစ်မူထူးခြားနေတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမျိုးရှိနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတော့ အားလုံးငေးမောစိုက်ကြည့်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ။
OPPO F7 ကတော့ လက်ရှိထွက်ပေါ်ထားတဲ့သတင်းတွေအရ မြန်မာပြည်မိုဘိုင်းဈေးကွက်ကို မိတ်ဆက်တင်ပို့လာဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်အချိန်လေးလဲဆိုတာကိုပဲ တစ်ချက်စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်မိတ်ဆက်လာမယ့် OPPO F7 ရဲ့ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းက အရင်တုန်းကဒီဇိုင်းတွေနဲ့ လုံးဝကွဲထွက်သွားပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်က ဖန်သားမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုထိတွေ့ခံစားနေရသလို ဖန်တီးထားပါတယ်။ အမြင်ပိုင်းမှာလည်း တစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေသလို ဟန်ပန်စတိုင်လ်ချင်းမတူကြတဲ့ ခေတ်လူငယ်တွေအတွက် လိုက်ဖက်မှုရှိစေမယ့် ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးအဖြစ်ဖန်းတီးပေးထားတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
မတူညီနဲ့ထောင့်ချိုးတွေကနေ အလင်းနဲ့အရိပ်တွေ ပေါင်းစပ်ဖြာကျလာတဲ့အသွင်ဒီဇိုင်းမျိုးအဖြစ် OPPO F7 ကို ထူးထူးခြားခြားဖန်တီးထားသလို အရောင်အသွေးပိုင်းမှာလည်း ယခင့်ယခင်တုန်းက မိတ်ဆက်ပေးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ Moonlight Silver အရောင်နဲ့အတူ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ဝင်းလက်နေတဲ့ Solar Red နဲ့ စိန်ပွင့်အရိပ်ပုံစံအဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့ Diamond Black ဆိုပြီး အရောင်၃မျိုး ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… OPPO F7 စမတ်ဖုန်းကတော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ အလန်းစားဖြစ်လာတော့မယ့် ပုံပါပဲ။
MyTech Myanmar2018-05-11T16:30:17+06:30May 11th, 2018|Mobile Phones|